BGA ee Wararka | BGA
Dugsiyada Mareykanka ee Ribbon Green ayaa lagu dhawaaqay
Ardayda BGA ee gobolka oo dhan iyo barnaamijka Hamilton ee loogu talagalay barnaamij waxbarasho oo gaar ah.
Sii wad aqrinta ...
Arday nasiib badan BGA wuxuu booqasho qaas ah ka helayaa ciyaaryahanka uu jecelyahay ee Red Sox - iyo tigidhada! Sii wad aqrinta ...
BGA iyo Mentor 2.0 iskaashi ayaa lagu sharxay Wariyaha Dorchester
Bandhigyo laga soo qaaday Field-ka Shaqada Bulshada ee Bulshada B
Brian Gonsalves, Agaasimaha Adeegyada Taageerada Ardayda ee Boston Green Academy Bandhigyada ka soo baxa Field waa muuqaal bille ah oo ku yaal Innovate @ BCSW oo loogu talagalay in lagu muujiyo sida ay dugsiga uga go'an tahay waxbarashada gudaha, iyo kobcinta xiriir miro dhal leh oo lala yeesho hay'adaha, labadaba gudaha Boston iyo adduunka oo dhan, …
AKHRISKA AKHRISKA »
Wadashaqeynta Gensler iyo Turner ee Akademiyada Cagaaran ee Boston waxay kobcin doontaa Xiriirinta
iyo Ka Qeybgalka Ardayga
WAYNESDAY, AUGUST 2ND, 2017
Gensler iyo Turner Construction waxay ku midoobeen Sanadka Magaalada iyo Akademiyada Cagaaran ee Boston ee Brighton, MA, si ay dib ugu habeeyaan oo ay u cusboonaysiiyaan maktabadda iskudarka badan ee dugsiga. Ka sokow marti-gelinta nidaamka Dugsiyada Dadweynaha Boston (BPS) maktabadda labaad ee ugu weyn ee wareegaya,…
Walaalaha Haitian waxay ku qalin jabinayaan dusha sare ee fasalkooda Kulliyadda Boston Green Academy
Sida ay soo warisay NBC Boston:
Ka dib dhulgariirkii ba'naa ee ka dhacay Haiti 2010, laba walaalo ah ayaa ku guuleystey waxayna ku jiraan ugu sareeya fasalkooda qalin jebinta ee Boston Green Academy ee Brighton.
Ilaahow, qoyska iyo aqoonyahanadu waa saddexda shay ee Carmelissa iyo Marlie Norbrun aad u qiimeeyaan.
“Waxaan ahay qofka sharci darrada ku gala fasalka 2017,” ayaa ay tiri Carmelissa.
“Anigu waxaan ahay salaanta koowaad ee fasalka 2017,” ayay tiri Marlie.
Kooxaha BGA waxay wataan Big Brothers Big Sisters Massachusetts Bay si ay usaaraan barnaamijka Mentor 2.0
Waxaan la shaqeynay Big Brothers Big Sisters ee Massachusetts Bay si aan u bilowno barnaamij cusub oo la jaan qaada arday walba oo dhigta fasalka 9aad ee BGA oo leh la taliye loogu talagalay u diyaarinta ardayda dugsiyada sare guusha ay ka gaadhaan kuliyada iyo shaqada. Tabarucayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay wax baraan ardeyda Dugsiga Sare ee Boston Green Academy iyagoo adeegsanaya manhaj qorsheysan oo lagu hormarinayo u diyaargarowga kuleejkooda iyo mihnadooda. Maareynta waxay dhacdaa hal jeer usbuuc kasta iyada oo loo marayo isgaarsiinta khadka tooska ah iyo bishiiba mar kulammo shaqsiyadeed galabtii.
Akademiyada Cagaaran ee Boston Green ayaa lagu soo bandhigay WBUR
WAYNESDAY, JANUARY 27TH, 2016
Arbacadii, Janaayo 27, BGA waxaa lagu soo bandhigay Barta NPR Station, WBUR, si looga wada hadlo iskaashiga aan la leenahay La-Talinta Sare ee Kuliyadda. Kulliyadda La-talinta ee Kuleejku waxay ka shaqaysaa kor u qaadista tirada dadka dakhligoodu hooseeyo, jiilka koowaad iyo kuwa aan hooseeya ee ardayda dhigta dugsiga sare ee gala oo dhammeeya kulliyadda.
BGA waxay la soo shaqeysay La-Talinta Kulliyadda labadii sano ee la soo dhaafay waxaanan uga mahadcelineynaa dhammaan shaqada adag iyo u hibeynta La-Taliyaha La-taliyayaasha Koleejyada, Rudy Luders.
Akademiyada Cagaaran ee Boston Green ayaa lagu soo bandhigay CityLine
Bishii Sebtember 2015, shaqaalaha BGA iyo ardayda ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka WCVB Channel 5'sCityLine . Qeybta waxay diirada saareysay edbinta kale waxayna wadaageen shaqadii fiicneyd ee Kooxda Taageerada Ardayda. Thanks to our our shaqaalaha bulshada, iskuduwayaasha bulshada, iyo macallimiinta cajiibka ah, BGA waa iskuul ay ardayda oo dhan, gaar ahaan kuwa la halgamaya ay ka heli karaan taageero iyo guul.
Madasha Dhallinyarada Caddaaladda Deegaanka
Jimcaha, Mey 15, 2015 Maareeyaha Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka Deegaanka 1 Maamulaha, Curt Spaulding wuxuu joogi doonaa BGA si uu ugala hadlo arrimaha deegaanka uguna dhiirrigeliyo ardaydeena inay noqdaan jiilka xiga ee hogaamiyaasha dhalinyarada. Ardaydu waxay kaqaybqaadan doonaan doodaha wareegi kara ee mawduucyada maxalliga ah. Ajandaha maalinta ayaa hoos ku yaal.
Ajandaha dhalinyarada ee Cadaalada Deegaanka
Ardaydu waxay ku calaamadeeyaan Green Apple Day ee Adeegga mashaariicda bay'ada-u-wanaagsan
Dugsiyada Dadweynaha Boston (BPS) ardayda, waalidiinta iyo macallimiinta ayaa ka soo qaybgalay maalinta Adeegga Green Apple Day ee Adeegga ee Sebtember 27 iyo usbuuca oo dhan. Waxaa sameeyay Golaha Dhismaha Green Green ee Mareykanka iyo Xarunta Iskuullada Cagaaran, Adeegga Green Apple Day ee Adeeggu wuxuu dhiirrigeliyaa dadaallada dugsiga cagaaran iyo hagaajinta dhismaha dugsiga cagaaran.
Isbuuca Farshaxanka Boston - Falalka Farshaxanka ee Random (oo leh Kulliyadda Dhismaha Boston
Kulliyadaha naqshadeynta Boston (BAC) waxay ku faraxsan yihiin inay dhawaaqaan iskaashiga guusha leh ee ka dhexeeya BAC, Boston Green Academy (BGA), iyo la-hawlgalayaasha bulshada si loo horumariyo Parklet, oo ah goob cusub oo bilic leh oo magaalada Boston ah. Arbacadii, Juun 25, 2014, beeshu waxay isu soo uruurisay si ay ugu dabaaldegaan goynta goynta 'Parklet-go'ay ee Parklet dhamaaday ee geeska Buswell Street iyo Park Drive, banaanka Mei Mei Street Kitchen.
Allison, deriska Brighton waxay tixgeliyaan saameynta ardayda
FRIDAY, Oktoobar 3RD, 2014
In ka badan 100 degane oo ka kala tirsan Allston iyo Brighton ayaa subaxnimadii Sabtida ku qaatay kulan bulsheed, iyaga oo rajeynaya in xal loo helo dhibaatada ka taagan qaybo ka mid ah xaafadooda oo ay sii kordhayaan ardayda ku meel gaarka ah.
Patrick touts wuxuu sii waday koritaanka shaqada tamarta nadiifka ah
Sannadkii saddexaad oo toosan, shaqooyinka Massachusetts warshadaha tamarta ee nadiifka ah waxay la kulmeen koror laba-lambar ah, oo ay kordheen 10.5 boqolkiiba intii u dhaxaysay July 2013 iyo 2014, Gov. Deval Patrick ayaa Isniintii ka sheegay Brighton.